Layaab:-''Waa la tarxiilayay balse diyaaraddii ay saarnaayen ayaa lagu amray inay degto''
Saturday February, 22 2020 - 16:34:21
Sunday September 01, 2019 - 10:00:57 in by salman abdi
''Waa la tarxiilayay balse diyaaraddii ay saarnaayen ayaa lagu amray inay degto''
Dadka u ololeeya xuquuqul insaanka ee dalka Australia ayay u suuro gashay inay hakiyaan tarxiilkii saqde dhexe ee lagula kacay qoys magan-gelyo doon ahaa.
Tallabaadan ayaa waxay suuragelisay in markii ay hawada galeen Nadesalingam, Priya iyo labadooda gabdhood lagu amray inay diyaaraddoodii lagu amro inay caga dhigato ka hor inta aynsan gaarin dalka Sri Lanka oo loo musaafurinayay.
Kiiska qoyskan ayaa caro badan ka dhaliyay dalkaasi tan iyo bishii Maarso ee sannadkii tagay markii ay maamulka si khasab ah uga saareen gurigoodii oo ku yaalay Queensland.
Australia ayaa waxay Jimcihii difaacday go'aankeeda ay tarxiilasyo qoyskaan iyadoo ku doodeyso inaysan ahayn dad qaxooti ah.
Racfaanada dhanka sharciga ah ee isdaba joog ahaa ayaa sidoo kale guul dareystay.
Lahaanshaha sawirkaSIMONE CAMERON
Waalidiinta qoyskan oo lagu magacaabo Nadesalingam iyo Priya ayaa ku kulmay, iskuna guursaday dalka Australia ka dib markii ay ka soo carareen dagaalkii sokeeye ee ka dhacay dalkaasi Sri Lanka. Labadooda gabdhood ee Tharunicaa iyo Kopika ayaa labaduba ku dhashay dalka Australia.
Taageerayaashooda ayaa ku doodayay inay la kulmi karaan cadaadis haddii lagu celiyo dalka Sri Lanka sabatoo waxaa loo aaneysan karaa saameyntoodii siyaasadeed ee hore.
Mucjiso lagu arkay dalka Australia?
Dad badan oo Australia ku soo dhaweeyay ciyaartoy qaxooti ah
Qoyskan ayaa waxay muddo Saddex sannadood ah ku noolaayeen magaalo yar oo lagu magacaabo Biloela ka hor inta aan bishii Maarso ee sannadkii hore si khasab ah loo geyn xarumaha dadka lagu hayo.
Jimcihii ayaa waxay maxkamad federaal ah go'aamisay in ilaa Arbacada soo socota aysan dowladda tarxiili karin gabadha u yar reerka.
Lahaanshaha sawirkaTAMIL REFUGEE COUNCIL
Image captionTharunicaa (bidix) and Kopika (midig)
Sidee iyagoo hawada ku jira ay u suurogashay in la joojiyo musaafurintooda?
Dibedbaxayaasha ayaa habeenkii Jimcaha gaaray Gegida diyaaradaha ee Melbourne, ka dib markii ay ogaadeen inay musaafurinta qoyska ay saacada uun ka dhimantahay.
Ka dibna diyaaradii ay qoyska saarnaayeen ayaa hawada gashay, balse nasiib wanaag intii ay hawada ku jireen ayaa qareenadoodii ku guleysteen kiiska gabadha yar oo ah in ilaa Arbacada aan la musaafurin karin, waxuuna garsooraha maxkamadda uu amar ku bixiyay in diyaaraddaasi ay khasab tahay inay ku dagto gobolka ugu dhow, waxayna caga dhigatay magaalada Darwin ee ku taalla waqooyiga dalkaasi Australia.
Muuqaallo iyo sawiro lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinayay qoyska oo ay diyaaradda ka soo dajinayaan ilaalada.
Angela Frederick oo saaxib dhow la'ah ayaa BBC-da u sheegtay in qoyska ay la daalaa dhacayaan daal iyo niyad jab dhanka maskaxda ah.
Waxay sheegtay in gabdhuhu ay ku dhex ooynayeen diyaaradda, halka hooyadood Priya-na loo diidey inay caruurteeda la fariisato.
Jimcihii dad badan oo reer Australia oo ay ka mid yihiin xildhibaano ayaa caro ka muujiyay dhacdadaan, iyagoo adeegsanayay baraha ay bulshada kuwada xiriidho.
Xildhibaanada mucaaradka ah ayaa wasiirka socdaalka David Coleman ku booriyay inay qoyskan u ogolaadaan inay dalka sii joogaan.
22/02/2020 - 13:37:15
Ruushka 'wuxuu faragalinayaa doorashada Mareykanka, si mar kale loo doorto Trump'
22/02/2020 - 07:46:59
" Waa Caqli Xumo Mana Qurux Badna In Odayaashii 2017 Sharaxnaa Ay 2022 " Xildhibaan Obama
18/02/2020 - 14:15:08